Sambo ROSMY : Tratra nitondra andramena tao Mananara Avaratra -
AccueilRaharaham-pirenenaSambo ROSMY : Tratra nitondra andramena tao Mananara Avaratra
03/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tratra tao anatin’ny sambo (botry) mitondra ny anarana hoe ROSMY ny bolabolana andramena miisa 22 ny zoma faha 30 ny volana jona 2017 lasa teo teny amin’ny sisin-dranomasin’ny Mananara Avaratra. Efa nisy ny fampitam-baovao izay azon’ ny APMF niara-niasa akaiky tamin’ny mpitandron’ny filaminana tany an-toerana, ka nahaingana ny fanenjehana. Vantany vao tonga anefa ireo tompon’andraikitra ireo dia fantatra fa nitsoaka avy hatrany ireo tantsambo izay tao anaty sambo, tsy hita ihany koa ireo izay nibata ny andramena, nandritra ny fisamborana. Raha ny fampitam-baovao azo dia fantatra ny tompon’ ireo botry ireo satria dia misy anarana mazava io sambo io, ary efa mandeha ny fikarohana amin’ izao fotoana izao. Io fanadihadiana io rahateo no hahalalana hoe saika hoentina aiza ireto andramena ireto. Taorian’ny fombafomba rehetra moa dia nogiazana avy hatrany ilay sambo sy ny andramena tao anatiny.
Mikasika izay fanadihadiana izay ihany dia fantatra fa izany antsoina hoe Randriantsara Donnie izany no tompon’io sambo antsoina hoe ROSMY io. Nitsoaka izy ary tsy ao amin’ny trano fonenany intsony taorian’ny fizahana nataon’ny zandarimaria. Efa misy kosa anefa ny fampitam-baovao azo, fa mbola tsy tafavoaka ao Mananara Avaratra io olona io, antony hametrahana ny sakana hatrany Soanierana ivongo. Io olona izay tompon’ny sambo io ihany koa izay fantatra fa mpandraharaha kalaza ao amin’ iny faritry iny, ka izao manao ny fanondranana andramena an-tsokosoko izao. Raha ny fantatra dia mandeha amin’ izao fotoana izao ny fisavana ataon’ny mpitandron’ny filaminana any an-toerana. Hatramin’ ny ora izay nanoratana izao vaovao izao kosa dia mbola tsy nisy aloha ny voasambotra, manoloana ity raharaha ity.
Ao anatin’ny ezaka izay ataon’ny Fitondram-panjakana mba hanadiovana ny sehatra tsy ara-dalàna amin’ny fanondranana andramena sy hazomainty izay iarahana amin’ny tsara sitra-po rehetra sy ny CITES dia mitohy ny vokatra tsara izay azo amin’ny fanenjehana ireo mpanondrana an-tsokosoko ireo harena sarobidy ireo.